ဆားဘီးယား vs အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံ - ကမ္ဘာ့ဖလားခွက်ကိုအရည်အချင်းများ | လောင်းကစားအကြံပေးချက်များ
+7/ 9584-983-763ကိုယ့်nfo@soက ccအီးrbအီးts ကိုhအဆိုပါot ကို.cအကွောငျး
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ:5စက်တင်ဘာ 2017 | Posted:5စက်တင်ဘာ 15:24 2017 GMT +2| သိမှတ်ဖွယ်ကြည့်ရှုအားပေး 1259 ကြိမ်.
ဆားဘီးယား vs အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံ – ကမ္ဘာ့ဖလားခွက်ကိုအရည်အချင်းများ
ဆားဘီးယား vs အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံ – ကမ္ဘာ့ဖလားခွက်ကိုအရည်အချင်းများ, အုပ်စု D ကို၏ 8 ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့အိုင်ယာလန်နှင့်ဆားဘီးယား. လောလောဆယ်နှစ်ခုပထမဦးဆုံးထားရှိနှစ်ဖက်. ဆားဘီးယားအိမ်မှာအားနည်းမော်လ်ဒိုဗာမှာကတခြားနေ့ကရိုက်နှက်ပြီးနောက်ထိပ်ပေါ်မှာနှစ်ချက်ရှင်းပါတယ် 3:0 အိုင်ယာလန်ဂျော်ဂျီယာမှာလမ်းမပေါ်တွင်ဖွင့်အမှတ်ကိုယူနေစဉ်, 1:1.
သိသာထင်ရှားတဲ့ကဒီမှာအိုင်ယာလန်ဖြစ်နိုင်သောအောင်ပွဲများအတွက်ပိုကြီးအလွန်အရေးကြီးသည်. အနိုင်ရရန်ပျက်ကွက်လျှင်အိုင်ယာလန်စဉ်ဆားဘီးယားပင်ဒုတိယနေရာဆုံးရှုံးရနိုင်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဒီ round အပြီးဝေလနယ်နှင့်အတူချည်ထားနိုင်တောင်မှမဲနှိုက်နှင့်အတူဦးဆောင်အနေအထားကိုစောင့်ရှောက်မည်. အမည်ရဝေလနယ်လမ်းပေါ်ပေမယ့်သုံးမှတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်ဘယ်မှာအားနည်းမော်လ်ဒိုဗာဆန့်ကျင်ဆော့ကစား. အောက်တိုဘာလအတွက်အိုင်ယာလန် vs ပွဲစဉ်ဝေလနယ်ကိုလိုက်နာလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုရန်မဟုတ်ပါ. ဒါကြောင့်, အိုင်ယာလန်ဖြစ်ကောင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ကြောင်းဖွင့်. ဒါပေမယ့်ဆားဗီးအသင်းအတွက်လူတိုင်းကိုသူတို့ကကမ္ဘာ့ဖလားများအတွက်ပထမနေရာနှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဇာ secure အားလုံးကိုသုံးမှတ်အဘို့ဤအရပ်၌မယ့်ကားအချို့လက်၌မည်သို့ပြောပါတယ်.
ဆားဘီးယား vs အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံ – ကမ္ဘာ့ဖလားခွက်ကိုအရည်အချင်းများ,နေဆဲ, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုခါတိုင်းလိုစကားပြောဆွေးနွေးချက်ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါသည် (နှစ်ဖက်စလုံးကနေ) ဒါပေမယ့်လာသောအခါဤကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောဂိမ်းက start, လက်တွေ့မှာတော့ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့် wont ကြောင့်တစုံတခုကိုမြင်. ငါဆိုလိုတာက, နှစ်ဦးစလုံးအသင်းများဖြစ်သည့်အခါ ”တစ်ဦးအနိုင်ရရှိဘို့မယ်” ကြောင်းအများအားဖြင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှအလွန်သတိထားချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်ထွက်လှည့်မယ့်, မှာအားလုံးနီးပါးမျှအရေးယူဆောင်ရွက်မှု, အနည်းဆုံးအားအချို့အစောပိုင်းအဆင့်တွင်. ပြီးတော့ 0:0 ထက်ဝက်မှာအများအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်. ဗိုလ်ခြေအလွန်အောင်ပွဲလိုအပ်ဘယ်မှာရုံမွန်တီနီဂရိုးနှင့်ရိုမေးနီးယားအကြားမနေ့ကရဲ့ဂိမ်းကြည့်ရှု, ပင်အနိုင်ရရှိနှင့်အတူရိုမေးနီးယားသီအိုရီအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိသည်မယ်လို့, အနိုင်ရခြင်းမရှိဘဲမဟုတ်ပင်သီအိုရီ, ဒါကြောင့်သူတို့သုံးဦးစလုံးရမှတ်အဘို့ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်. သို့သော်လက်တွေ့၌မအဖွဲ့သည်တစ်ဦးအနိုင်ရရှိတာမှလိုက်ဖမ်းမခံခဲ့ရဘယ်မှာတော်တော်ပျင်းစရာကောင်းပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အနီးပါးပြီးစီးရန် 0:0.
ဆားဘီးယားနှင့်အိုင်ယာလန်အကြားပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဂိမ်းဘဲဂရိတ်အတွက်ကစားနဲ့အတူအဆုံးသတ် 2:2 ဆှဲငငျ. ကျိန်းသေယခုတွင်ငါသည်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထားဂိမ်းကိုရိုက်မရ. ဆားဘီးယားအိမ်မှာဆော့ကစားတဲ့အခါမှာ, ကြောင်းများသောအားဖြင့်ကသူတို့ဘက်ကနေကအရမ်းထိုးစစ်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်. Plus အား, နောက်ကျောထို့နောက်သူတို့ပထမဦးဆုံးဂိုးသမားမရှိဘဲ Stojkovic နှင့်လူငယ် Rajkovic ရည်မှန်းချက်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်. Rajkovic အလွန်ထူးချွန်သော်လည်းရိုးရိုးသားသား, သူကဆားဘီးယားကိုပြန်ပြီးတော့ဂိုးထားပြီးနှစ်ဦးစလုံးပန်းတိုင်များအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့. အခုတော့ Stojkovic နှင့်အတူ, ဆားဗီးကာကွယ်ရေးလမ်းပိုမိုအားကောင်းကြည့်ရှုမည်. ဒီအကောင်လေးကိုဆားဗီးအဖွဲ့သည်ဒါအကြိမ်ပေါင်းများစွာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်.
အလုံးစုံ, IMO အိုင်ယာလန်ခဲဂိုးသွင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်, ဆားဘီးယားဖြစ်ကောင်းလည်းထိုးစစ် oriented မဟုတ်, ဖြစ်ကောင်းနှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့များလည်းထိုးစစ်ပထမဦးဆုံးအတွက် oriented မဟုတ် 45 မိနစ်များ.
ပထမနှစ်ဝက်မဲနှိုက် IMO ကဒီမှာကြီးမြတ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်.
အီတလီနိုင်ငံ vs ဆွီဒင်
Cremonese vs Empoli ( 1 & 1.83 )